Global Voices teny Malagasy » Senegaly: Fikorontanana an-tsekoly · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Desambra 2008 7:50 GMT 1	 · Mpanoratra Norbert Bousigue Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Senegal, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora
Maro ny mpanao gazety sy mpamaham-bolongana Senegaly no mitodika amin'ny fanamby lehibe atrehina amin'ny fitaizana ny ankizy any Senegaly.
Ao amin'ny lahatsoratra navoakan'ny vohikala vaovao PressAfrik  [fr], no anoratan'i Awa Diédhiou fa “Tandindonin-doza ny sekoly Senegaly”, satria maro amin'ny sekoly – indrindra ny ao Dakar – no manakaiky loatra ny sekoly,
Tandindonin-doza ny sekoly Senegaly. Maro amin'ny tranon-tsekoly no miofo tsikelikely ho toeran-ditra ary lasa toerana mahatsikaiky mikorataba ny tontolony. Mizotra ao anaty tabataba mankarenintsofina avy ao an-tsena ny fampianarana ary izany somebiseby izany noahafahan'ny jiolahim-boto sy ny mpifoka rongony miditra an-tsokosoko ao an-tsekoly.
Sarin'ny miara-mianatra aoamin'ny sekolin'i Agnam-Goly, Senegal  avy amin'i Adama Diop, alalan'i Wikipedia Commons License.
Naomed, nanoratra [30th of November 2008] ao amin'ny bolongana Politique au Sénégal  [fr], no mamoaka tranga hafa :
Hatramin'ny 2001 ka mandraka ankehitriny, dia fitondrana vohoka 1 050 raha kely indrindra no voaisa any amin'ny faritry Kolda [faritra manana mponina 300 000]. […]
Mpampianatra no antsasa-manila maherin'ny nahabevohoka ireo mpianatra ireo.
Raha atao amin'ny teny bontolo kokoa, dia olana goavana roa no avoitran'ny mpanoratra.
Voalohany ny tsy fahampian'ny fampianarana ara-pananahana any an-tsekoly, izay mahatonga ny zazavavy ho “matokitoky foana”, “tsara hohanina” ary “tsy manana ny fahalalana fototra”. Tsikerain'i Naomed ny mpitondra fivavahana izay “faingana raha hanameloka ny fomba fiainana tandrefana” ary heveriny fa ny fahotana fototra dia ny tsy fahalalàna. Ary tsy fahalalana toa ifampizarana amin'ny mpampianatra “ tsy mahay mampiasa fimailo”.
Faharoa, ny tsy famaizana ireo mpampianatra mikaoty ny mpianany ireo. Nasongadin'i Naomed fa amin'ny ankapobeny dia tsy misy ny fitoriana azy ireo. “Mifampiraharaha ny olona dia vita ny raharaha,” hoy Naomed. Miova tanana ny vola dia adino ny raharaha.
Miasa tsara ny firaisana tsikombakomba satria misy ny fifanarahana tsy miteny manarona ireny fahadalana ireny, manarona ny zava-drehetra tahaka ny kolikoly,ny fanodikodinana zaza tsy ampy taona… Izany no fiantraikan'ny fahasahiranana eo amin'ny Senegaly hanasazy ny namany na mpiara-monina aminy. Fiantraikan'ny Senegaly hifampiraharaha hatrany na dia amin'ny tranga tsy azo ifampirahrahana intsony aza. Fiantraikan'ny fironan'ny Senegaly hamaha ny olana amin'ny alalan'ny vola hatrany.
Nohamarinin'i Hamidou Sagna izany toe-javatra izany raha namoaka lahatsoratra ao amin'ny allAfrica.com  [fr] izy mikasika ny fihetsiketsehan'ny ONG sy ny mpianatra any Hann-Bel Air, distrikan’ i Dakar , miantso ny fampitsaharana ny herisetra, fihoara-pahefana, fanimbana fitaovam-pananahana ary fanaovana an-keriny ny ankizivavy. Manao T-shirt misy izao soratra manaraka izao ny ankizy “Te-hianatra tsy misy tahotra aho”, “Ny sekoliko, toerana atokisana hianarana” ary “Atsaharo ny fanorisorenana ankizivavy”.
Lahatsoratra iray ao amin'ny Scoops de Ziguinchor  [fr] no itaterana ny kabarin'ny Ben'ny tanànan'i Ziguinchor , teo ampanolorana fanaka sy kojakojam-pianarana ho an'ny sekoly. Faly izy ary niteny amin'ny ray aman-dreny hoe: “Nihafy tokoa ianareo ho amin'ny ho avin'ny zanakareo. Safidy tsara izany”. Fa ny tena nahavariana, dia notsikerainy avy eo ny fanabeazana:
Na izany aza dia mitovy hevitra amin'ny olona ny Ben'ny tanànan'i Ziguinchor fa arakaraka ny fahaizana azon'ny olona no handaozany ny (asa) tany. “Lasa an-tery ny asa tany ankehitriny. Tahaka ny hoe sazy ho an'ireo izay tsy afaka tany an-tsekoly na tsy nahomby tamin'ny fianarana izany. Tokony eritreretina ny amin'izany. Fa izany no fahavalo voalohan'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny sosialy”.
Nomarihin'ny Ben'ny tanàna moa fa mamery tsikelikely ny mponina ao aminy ny tanàna ambanivohitra; toa manabe ny olona hifindra ho any an-drenivohitra hiatrika ho avy mbola tsy fantatra, ary matetika mahatonga azy ireny ho tsy an'asa any, ny sekoly.
Soa ihany fa mihamaro ny ankizy no mamonjy sekoly ny any Senegaly. Ny antontan'isan'i UNESCO  no namoaka fa mianatra any amin'ny ambaratonga voalohany
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/12/06/1411/
 Sarin'ny miara-mianatra aoamin'ny sekolin'i Agnam-Goly, Senegal: http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Classe_de_CP_de_Agnam_Goly_06-07.jpg
 Politique au Sénégal: http://www.blogs-afrique.info/senegal-politique/index.php/2008/11/30/1798-quand-expliquera-t-on-aux-enfants-comment-on-fait-les-bebes
 Scoops de Ziguinchor: http://scoopsdeziguinchor.blogspot.com/2008/12/sngalziguinchor-robert-sagna-plaide.html